WAREYSIYO Archives - Page 2 of 276 - Warqaad.com
WAREYSIYO DHAGEYSO: Hooyada Gabadhii lagu kufsaday Galdogob oo la wareystay January 16, 2017 Iyadoo Warbaahinta Guddaha Dalka Soomaaliya ay hadal heyso fal kufsi ah oo loo geystay Gabdh yar islamarkaana Sawirro iyo Muuqaal laga soo duubay la soo dhigay DHAGEYSO: Shariif Xasan oo markii ugu horeysay ka hadlay Guushii Jawaari & Xilka uu la rabay Beeshiisa January 16, 2017 Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ahaa Murashaxiinta u taaganaa xilka Madaxweyanaha soomaaliya Balse Guushii Jawaari uu ka gaaray Kursiga Baarlamaanka ay god
DHAGEYSO: Aabo & Wiil uu dhalay oo si naxariis daro ah loo dilay January 16, 2017 Wararka ka imaanaya Gobolka Bakool ayaa waxaa ay ku soo waramayaan in Ciidamo ka amar qaata Guddoomiyaha Gobolkaasi ay si ku tala gal ah u dileen Laba ruux oo s
DHAGEYSO: Guddomiyihii Marka oo afka furta kaddib Marii Al-Shabaab.. January 16, 2017 Maxmaed Cusmaan Yariisow Guddoomiyihii Hore Ee Magaalada Marka ayaa waxaa uu markii ugu horeysay ka hadlay dhibaato dadka deegaanadaaas ay ku hayaan Al-Shabaab.
DHAGEYSO: Carruur & Hooyadood oo si naxariis darro ah loo gubay January 16, 2017 Degmada Bandiiradley Ee Gobolka Mudug Afar ruux ayaa ku geeriyootay labo kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kadib markii Guri ay deganaayeen dab la qabadsiiyay.
AKHRISO: Magacyada Musharaxiinta Somaliland ee maanta ku tartamaya Aqalka Sare January 16, 2017 Waxaa maanta lagu wadaa in mar kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabato Doorashada Xubnaha Aqalka Sare ee Beelaha ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland, wa
Video: Militeriga Soomaaliya oo Xasan Sh Shaqadiika ceyriyay – Yaase Noqonaya Taliyaha ciidamada Xooga dalka? January 15, 2017 War kasoo baxay taliska ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay ugu dhawaaqeen in Xasan Sh Maxamuud uu dhamaaday xilkiisa isla markaana waxii haatan ka danbeeya uu
DHAGESO: Guddoomiye ka tirsanaa Al-Shabaab oo Dowlada ku soo biiray January 15, 2017 Guddomiyihii Al-Shabaab ee Deegaanka Doonburaale ee Gobolka Shabelaha Hoose ayaa Maanta waxaa uu isku dhiibay Ciidamada Dowlada.
Sargaal ka tirsan Ciidamada DHAGEYSO: Xarun ay ku shirayeen Saraakiil Al-Shabaab oo la Duqeeyay January 15, 2017 Faah faahin ayaa ka soo baxaysa Goob ay ku shirsanaayeen Saraakiil K atirsan Al-Shabaab oo Maanta ay Weerar gaadmo ah ku qaadeen Diyaarado dagaal.
DHAGEYSO: War farxad geliya Shacabka oo looga dhawaaqay… January 15, 2017 Iyadoo Maalmihii Dambe dadka iyo Darawalada Gaadiid leeyda Gobolka Shabellaha Hoose ay ka cabanayeen Is baarooyin la so dhigay Deegaanada Gobolkan ayaa waxaa